Homeसमाचारधर्मशास्त्र अनुसार: यसकारण महादेवलाई ‘निराकार’ रुपमा पूजिन्छ
December 2, 2020 admin समाचार 9428
आदि र अ’न्तका देवता भनेर चिनिने भग’वान शिवको न त कुनै स्वरुप छ न आकार । उनलाई सा’क्षात निरा’कार मान्ने गरिन्छ । आदि र अन्त नभएको कारण नै भगवान शिलाई निरा’कारुप मान्ने गरिन्छ । साथै उनको सा’कार शंकरको रुपमा उनलाई पूजा गरिन्छ ।
किन भगवान शिव’लाई यहि रुपमा पूजा गरिन्छ ?
यो प्रश्न तपाईको मनमा पक्कै उठेको होला ।कि, किन भगवान शिवलाई निराकार लि’ङ्गको रुपमा पुजा गरिन्छ ।
लि’ङ्गको रुपमा पूजा गर्दा सारा व्रह्माण्डको पूजा हुन्छ । किनभने संसारको मूल का’रण नै महादेवलाई मान्ने गरिन्छ । त्यति मात्रै होइन,भगवान शिवको मूर्ति तथा लि’ङ्ग दुबै रुपमा नै मानिसहरु अत्या’धिक श्रद्धा र विश्वासका साथ पूजा गर्दछन् । शिवको अर्थ परम कल्या’णकारी भन्ने हुन्छ । र लि’ङ्गको अर्थ हुन्छ, श्रृजन ।यसैबाट शिवको स्वरुप अवगत भएर शिव’लिङ्गको अर्थ प्रमाण भन्ने हुन्छ ।
के छ वेदमा ?
तपाईलाई जानकारी गराऔँ कि, वेद र वेदान्तमा लि’ङ्ग शब्द सुक्ष्म शरीरको लागि उपयोगमा आउँछ ।यो सुक्ष्म शरीर १७ तत्वबाट बनेको हुन्छ । त्यो तत्व हो, मन, वुद्धि, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच क’र्मेन्द्रिय र पाँच वायु । दोश्रो तर्फ वायु पुराणलाई मान्ने हो भनेप्रलयकालको बेला जब सारा श्रृष्टि लीन हुन लागेको बेला र फेरी श्रृष्टिकालमा प्रकट हुने बेलालाई लि’ङ्ग भन्ने गरिन्छ ।
समुन्द्र मन्थका बेला निस्किएको वि’षबाट सारा विश्व ध्वस्त हुन लागेपछि भगवान शिवले सबै विष पान गरेका थिए । त्यसैकारणले उनको नाम नीलकण्ठ भएको थियो । त्यस्तै महादेवले पान गरेको विषले उनको शरीरमा ताप’क्रम बढ्दै गएको थियो । त्यहि तापक्रम कम गर्नको लागि शिवलि’ङ्गमा जल चढाइने गरिन्छ । उक्त परम्परा आज पनि जारी नै रहेको छ ।
जब संसारका कर्ता धर्ता विष्णुले श्रृष्टिका रच’यिता व्रह्मासँग मिलेर भगवान शिवसँग प्रश्न गर्दछन्, तपाई कसरी खुशी हुनुहुन्छ रु तयसको उत्तरमा शिवले भन्छन्, यदि मलाई खुशी बनाउन चाहानेले शिव’लिङ्गको पूजा अवश्य गर्नुहोस् ।
त्यति मात्रै होइन,कुनै पनि प्रकारको समस्या नओओस् भन्नेले जल चढाएर शिवलि’ङ्गको पूजा गरेमा कुनै पनि सम’स्याले सताउने छैन । एजेन्सीको सहयोगमा
October 31, 2020 admin समाचार 10871
October 4, 2020 admin समाचार 11528
January 19, 2021 admin समाचार 6245
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226355)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196988)